Maleeshiyadii ku dagaalamay Magaalada Marka ayaa xal loo helay. – XOGMAAL.COM
Maleeshiyadii ku dagaalamay Magaalada Marka ayaa xal loo helay.
Waxey lu guuleysteen ciidamada in ay maleeshiyaadka ka soo saaraan daaro dhaadheer oo muddo dhufeyso iyo aagag dagaal u ahaa labada dhinac, waxaana ugu dambeyn la isugu keenay barxad weyn oo ku taala bartamaha Marka.
Wararka aan ka heleyno magaalada Marka ee Xarunta Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in Guutada 14-ka Oktoobar ee Ciidanka Xoogga Dalka ay ku guuleystay in lakala qaado Maleeshiyo beeleed muddo 6 sano ah isku hor fadhiyay halkaasi.
Magaalda Marka ayaa mudo waxey marti galineyso dagaalo badan oo lahaa wajiyo kala duwan kuwaasi oo waxyeello muuqata gaarsiiyay Magaalada iyo dadkeeda.
Sidoo kale magaalada waxaa marar badan isu daba maraya Ciidanka Dowladda iyo Al shabaab, Sawirradan waa kuwo warbaahinta qaarkood ay baahiyeen.
Sawirro:- C/Kariin Qalbi Dhagax ayaa lagu soo dhaweeyay Dhuusa-mareeb